Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Mikel Oyarzabal Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Anyị Mikel Oyarzabal Biography na -agwa gị akụkọ gbasara akụkọ nwata ya, ndụ nwata, nne na nna (Mr na Oriakụ Ernesto Oyarzabal), ndụ ezinụlọ, na ụmụnne ya. Karịa nke ahụ, Nwanyị/Nwunye Mikel Oyarzabal ga -abụ (Ainhoa ​​Larrauri), ibi ndụ, ndụ onwe onye na ọnụ ahịa net, wdg.
Na nkenke, ihe ncheta a bụ maka akụkọ ndụ nke onye na -eme egwuregwu nwere ọgụgụ isi, onye egwuregwu bọọlụ nwere akara mmụta na azụmaahịa sitere na Mahadum Deusto.
Lifebogger na -amalite akụkọ Mikel Oyarzabal site n'ibu ụzọ gwa gị ihe ndị mere n'oge ọ tolitere na Eibar, ama ama Basque Country nke Spain. Anyị na -aga n'ihu mgbe onye Spen nwere nkà ghọrọ onye ama ama na egwuregwu ahụ mara mma.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ gbasara ndụ gị gbasara ọdịdị nke Mikel Oyarzabal's Bio, anyị emeela ka ọ dị mkpa igosipụta mmalite ndụ ya na ihe ịga nke ọma. Lee, nchịkọta nke njem ndụ ya dị ịtụnanya.
Mikel Oyarzabal Biography - Lee mmalite ndụ ya na ihe ịga nke ọma osisi.
Ee, onye ọ bụla na -enwe ekele maka otu Winger Unorthodox si eji aghụghọ eme oghere nke ọ chọrọ ịwakpo. Ọzọkwa na ọ maara nke ọma n'ịgụ mmegharị nke ndị otu ya - nke ọma.
N'agbanyeghị otuto nke ịbụ otu n'ime ndị na -egwu egwuregwu kacha mma na Spain (ọgbọ ya), anyị na -achọpụta na ọ bụ naanị ndị egwuregwu ole na ole gụrụ Mikel Oyarzabal's Biography. Anyị kwadebere ya maka gị n'atụghị egwu, ka anyị bido.
Mikel Oyarzabal Akụkọ nwata:
Maka ndị mbido Biography, ọ na -ebu aha otutu - Bigfoot. A mụrụ Mikel Oyarzabal Ugarte n'ụbọchị 21st nke Eprel 1997 nye ndị mụrụ ya - Mr na Oriakụ Ernesto Oyarzabal, n'obodo Eibar, Spain.
Akụkọ akụkọ Real Sociedad bịara n'ụwa dị ka ọkpara - n'etiti ụmụaka atọ. Mikel na ụmụnne ya si n'otu nne na nna. Lee foto Ernesto na nwunye ya - nne na nna dị mpako nke nyere Mikel (ọ bụghị akụ na ụba), mana mmụọ nsọpụrụ.
Adnan Januzaj Nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma
Zute nne na nna Mikel Oyarzabal - Mr na Oriakụ Ernesto Oyarzabal.
Afọ na-eto eto-n'akụkụ nwanne ya ọ hụrụ n'anya:
Mikel enweghị obi ụtọ naanị nwata, kama ọ na -esokarị nwanne ya nwanyị nke okenye, Cristina Oyarzabal. Foto dị n'okpuru, ọ bụghị mgbe niile ka onye isi ma ọ bụ nwanne maara ya niile. Kama, Cristina Oyarzabal lekọtara obere Mikel nke ọma - ebe ọ na -ekweghị ka ọ na -awagharị n'ọchịchịrị naanị ya.
Mgbe ọ bụ nwata, nwanne ya nwanyị nke okenye, Cristina Oyarzabal lekọtara Mikel nke ọma.
Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, ozi ọzọ na -enye ọ beụ dakwasịrị ezinụlọ ha. Nne na nna Mikel Oyarzabal nwere mgbakwunye ọzọ na ezinụlọ ha - nwanne ya nwanyị nke ọdụdụ, onye ha na -akpọ Elene.
Ọtụtụ mgbe, anyị na -ewere ndị amụrụ nwa dị ka ndị na -ahụ n'anya na ndị a hụrụ n'anya. Ha dị oke ọnụ ahịa ma nwee mmasị ijikọ onwe ha na ụmụnne tọrọ. Nwanne nwanyị Mikel Oyarzabal (Elene), abụwo ọmụmaatụ nke otu. O nwere nnukwu nwanne na nwanne - na -elekọta ya mgbe niile.
Cristina, Mikel na Elene - na -ese foto (afọ gara aga).
Ezinụlọ Ezinụlọ Mikel Oyarzabal:
Onye Spaniard na-eto ezinụlọ nwere njikọ chiri anya, onye anyị na-ahazi ego ya na ụdị ndụ ya n'okpuru klaasị Spanish. Onye isi ezinụlọ Mikel - Ernesto Oyarzabal - bụ nwoke na -anaghị alụ ọgụ na ego - na -ahụ mgbe niile na onye ọ bụla nwere obi ụtọ.
Mikel Oyarzabal nwere ezinụlọ mara mma. Anyị na -achọpụta na Cristina na -efu na foto a.
Ernesto na nwunye ya bụ ndị dị nfe na -akwado ụmụaka na ọrụ ọ bụla masịrị ha. Mikel, mgbe ọ nọ na soshal midia, mere ka ndị egwu mara ihe gbasara papa ya na -akwado ya. N'okwu ya;
Ọ bụ onye pụrụ iche. ma nne m na ya na -akwado m mgbe niile na mkpebi niile m mere.
ha ajụghị ajụjụ ihe ọ bụ ma ọ bụ ihe m chọrọ ime na ndụ.
Ọ bụrụ na enwere m obi ụtọ n'ihe ọ bụla, ha na -agbalị inyere m aka na ya.
Mmalite ezinụlọ Mikel Oyarzabal:
Ọkpụkpụ aka mara mma nwere mba Spanish. Nke ka mkpa bụ na o nwere ọbara Basque na -aga na akwara ya.
Eibar, obodo - ebe nne na nna Mikel Oyarzabal nwere ya, dị n'ime Basque Autonomous Community of Spain. N'ihi ya, site n'echiche agbụrụ, ọ bụ Basque zuru oke.
Maapụ a na -akọwa mmalite ezinụlọ Mikel Oyarzabal - site n'echiche agbụrụ.
Ọzọkwa ịmara, ezinụlọ Mikel Oyarzabal nwere agbụrụ ha na San Sebastian - obodo ha na mpaghara Basque nke mba ahụ.
N'ịbụ nke dị na Northern Spain, mpaghara a nwere oke ugwu Ugwu Urgull, nke na -agbada n'ọdụ ụgbọ mmiri na akụkụ osimiri Urumea. Lee ọmarịcha anya ịhụ.
Mmalite Mikel Oyarzabal-San Sebastian-nke a maara dị ka Donostia na Basque, ama ama maka osimiri ya, Old Town mara mma na ụlọ oriri na ọ -ụ firstụ ndị klaasị mbụ.
Mikel Oyarzabal Mmụta:
Maka Ernesto nna ya, otu ihe na -edo anya mgbe niile maka echiche ya nke ibute ụzọ n'ezinụlọ na -aga nke ọma. Ọ bụ eziokwu na onye ọ bụla - kwesịrị ịbụ onye gụrụ akwụkwọ nke ọma. N'ihi ya, ọ bụghị ihe ijuanya na Mikel Oyarzabal nwere akara azụmaahịa na Mahadum Deusto.
Nkà Basque dị mma na ijikọta egwuregwu na ịmụ ihe - kemgbe ọ bụ nwata. Ọ bụghị ihe niile gbasara bọọlụ, kamakwa ọmarịcha ọgụ. Na mbido, nne na nna Mikel Oyarzabal mere ka ọ debanye aha ya n'ụlọ akwụkwọ taekwondo ebe ọ nwetara eriri uhie - ọkwa dị n'okpuru eriri ojii.
Mikel Oyarzabal bụ ụmụaka na -agbanwe agbanwe - onye na -enyere bọọlụ aka, sonyere na Taekwondo.
Akụkọ Mikel Oyarzabal Football:
Nnyocha na -egosi na site na nwata, onye na -eme egwuregwu bụ Germán Andueza Berregi zụrụ ya. Nke a bụ nwoke, nke a na -akwanyere ùgwù ma nwee njikọ chiri anya na egwuregwu Basque. Ọ bụ ihe dị mkpa na ọganihu Mikel ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị.
Site na foto dị n'okpuru, anyị na -ahụkwa otu omume. Na Mikel Oyarzabal na ezinụlọ ya tinyere aka na mmemme metụtara Eibar - ụlọ ọrụ egwuregwu bọọlụ Spanish nke dị na Gipuzkoa, Basque Mba kwụụrụ onwe ya.
N'ihi ya, ọ bụghị ihe ijuanya na obere mmasị Mikel nwere maka bọọlụ butere ya ebe n'ụlọ akwụkwọ klọb.
Mikel Oyarzabal Biography - Ụzọ ama ama Akụkọ:
Onye na -eto eto na -egwuri egwu na mpaghara Eibar dị ala, ebe ọ nọrọ ruo mgbe ọ gbara afọ 14. N'oge ahụ, Mikel Oyarzabal chere na ọ dị mkpa inyocha gburugburu bọọlụ ọhụrụ.
N'afọ ahụ (2011), ọ hapụrụ Eibar wee sonyere Real Sociedad. Mgbe oge egwuregwu bọọlụ ntorobịa abụọ gasịrị, Eibar kpọghachiri ya na mbinye ego. Ha wee hapụ ya ka ọ pụọ maka klọb ochie ya afọ abụọ ka e mesịrị. Mgbe ọ nọ ebe ahụ, Mikel ghọrọ onye Akara kachasịnụ nke Real Sociedad Academy.
Ọganihu na Senior Football:
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ nke ọma na bọọlụ agụmakwụkwọ (afọ 2014), talent Basque nwetara onwe ya oku na Real Sociedad B. N'oge na -adịghị anya, onye Spaniard na -eto eto biri na ndị otu egwuregwu, na -enweta ebe dị ka onye mbido karịa ndị dị arọ.
Na, nke kachasị mkpa, o mechara nwee nọmba iri na 10 n'azụ ya, nọmba ndị nnọchianya nke kpakpando na -eyi dị ka Lionel Messi, Luka Modric na Jago Aspas.
2017 bụ mmalite mgbanwe mbụ maka ọrụ Mikel. N'afọ ahụ, onye dị afọ 20 nwetara nkwanye ùgwù dị ukwuu site na nne ya-ka ọ na-enyere Spain U21 aka iru na njedebe nke UEFA European Championship.
Ọ dị nwute na ndị otu Oyarzabal furu efu na Germany, nke nwere kpakpando dịka Serge Gnabry na Thilo Kehrer. Ndị na-aga n'ihu anaghị ada mbà mgbe mfu ahụ gasịrị ka afọ abụọ gachara, ọzọ European European Under-21 Championship bịara ịkụ aka. Oge a, Spain meriri ya.
Mikel Oyarzabal Biography - Akụkọ ịga nke ọma:
N'ụzọ dị ịtụnanya, ikpeazụ nke 2019 UEFA European Under-21 Championship ka dị n'etiti Spain na Germany. Agụụ na-agụ ya nke ukwuu maka ịbọ ọbọ, na ndị otu U-21 nke Spain nwere kpakpando kachasị elu dị njikere ime ka Germany taa ahụhụ maka ihe ha mere ha afọ abụọ gara aga.
Ndị nọ n'òtù Spanish n'okpuru 21 na -agụnye mmasị nke Dani Olmo (Dinamo Zagreb), Pablo Fornals (Villarreal) na Dani Ceballos (Real Madrid) na Unai Simón (Egwuregwu Bilbao). Oyarzabal mezuru akara aka ya n'ụzọ ụfọdụ ka ọ na -eji ọ heldụ jide iko mba ụwa mbụ ya.
Asọmpi Copa del Rey:
N'ịgafe ngosi egwuregwu 200 nke nwere ihe mgbaru ọsọ karịrị 60 maka Real Sociedad, Mikel Oyarzabal kwadoro klọb ya ọkwa akụkọ ifo. Iji chọọ nkwanye ugwu maka aha klọb ya, nwa amaala Eibar n'akụkụ Adnan Januzaj (na ndị ọzọ) gbalịsiri ike maka Copa del Rey.
Na 2019–20 Copa del Rey, Mikel Oyarzabal nyeere ndị otu ya aka iru ngwụcha nke mbụ kemgbe 1988. Yiri ihe mere na mbụ UEFA European Under-21 Championship, oge ọzọ nke Copa del Rey ghọrọ mmeri.
Ezigbo ihe ịga nke ọma Sociedad:
Ọbịbịa nke nnukwu aha - amasị nke Alexander Isak site na Borussia Dortmund na David Silva (sitere na Man City) mere ka White na Bad bụrụ ike. Obi dị m ụtọ na, n'oge oge 2019/2020 ahụ, ha ruru ngwụcha Copa del Rey.
Dị ka a tụrụ anya, Oyarzabal rụrụ ọrụ nke ọma ebe ọ meriri naanị ihe mgbaru ọsọ nke Final Copa del Rey 2020 na -egbu oge. Site na ihe mgbaru ọsọ ahụ, Real Sociedad nwetara iko mbụ ha n'ime afọ 34 ka ha meriri Athletic Bilbao.
Oge ole maka Mikel Oyarzabal ka ọ na -eme emume iko Copa del Rey nke 2019/2020.
N'oge edere Bio a, Real Sociedad na -ejide ọnọdụ nke abụọ na La Liga mgbe egwuregwu asaa nke oge 2021/2022 gasịrị. Na talent dị ka Ọnye na -bụ Alexander Sørloth? na Mathew Ryan isonyere klọb ahụ, anyị nwere olile anya na Real Sociedad nwere ike ịlụ ọgụ maka ebe Champions League.
Obi abụọ adịghị ya, Mikel Oyarzabal bụ ihe dị oke egwu na football. N'ịkwado ọkwa ya dị ka ezigbo akụkọ maka Real Sociedad, ọ nwere ike bụrụ nnukwu mbufe nwere ike iburu ya. Naanị ma eleghị anya, ọ nwere ike ịbụ Nhọrọ ọzọ Harry Kane maka Man City. Ndị ọzọ, dị ka anyị na -ekwu maka akụkọ ndụ ya, bụ akụkọ ugbu a.
Ọnye na -bụ Ainhoa ​​Larrauri? … Mikel Oyarzabal Nwanyị nwanyị:
Zute nwanyị nke ndụ ya.
Onye ọkpụkpọ Spanish a na -eme ememe abụghị otu. N'ezie, enwere nwanyị ọ na -eme mkpakọrịta. Ainhoa ​​Larrauri (nke dị n'elu) bụ enyi nwanyị Mikel Oyarzabal. Nnyocha nwere ya na ndị hụrụ ya abụọ na -akpa kemgbe ọtụtụ afọ - tupu 2015.
N'ihi njirimara ha, onye ọkpọ Basque na enyi nwanyị ya - Ainhoa ​​Larrauri - na -ahọrọ ịghara ịdọrọ mmasị ma ọ bụ mgbasa ozi nke ukwuu na mmekọrịta ha. Mpụta ihu ọha mbụ ha bịara n'oge Mikel mere emume mmeri UEFA U-21 ya na ezinụlọ ya.
Igor Zubeldia (etiti aka nri) na Mikel Oyarzabal (etiti aka ekpe) sere foto ka ha na ndị enyi ha nwanyị na-eme ememme-Ione na Ainhoa-mgbe mmeri Spain meriri na asọmpi UEFA Euro U21.
Ainhoa ​​Larrauri mụrụ na ụbọchị 17th nke Mee 1997. Ọ bụ ezie na ọ naghị ele obere anya, Mikel Oyarzabal dị naanị otu ọnwa karịa nwunye ya ka ọ bụrụ. Ọzọkwa ịmara, ma ndị hụrụ n'anya na -ekerịta akara zodiac Taurus.
Ihe ọdịnihu ga -adịrị Ainhoa ​​Larrauri na Mikel Oyarzabal:
Ikpe site n'ụzọ ndị abụọ a siri hụ onwe ha n'anya ruo ọtụtụ afọ, o yikarịrị ka ha ga -abụ di na nwunye. N'oge Mikel Oyarzabal mere ọha ihe onyonyo a (n'ụbọchị ọmụmụ 18th nke Ainhoa ​​Larrauri), ọ gwara ya okwu ndị a;
Ịhụnanya nke Ainhoa ​​Larrauri na Mikel Oyarzabal nwere oke enweghị oke. Ewere foto a na ncheta ọmụmụ ya afọ 18.
Maka na gị, enwere ọtụtụ okwu. Ekele m ịhụnanya m, kporie ndụ 18 ị nwere karịa ka o kwesịrị. Daalụ maka ihe niile!
Onye na -eme mmemme ụbọchị ọmụmụ, Ainhoa ​​Larrauri, ji obi ekele zaghachi… na -ekwu;
ole m hụrụ gị n'anya, ekele gị nke ukwuu kariii ♥♥♥
Ọnye na -bụ Mikel Oyarzabal n'èzí football? Anyị ga -eji ihe onyonyo a kọọrọ gị ihe gbasara onye egwu Basque.
Mikel Oyarzabal Ndụ Onwe Onye - Akọwara.
Ihe mbụ nke mbụ, Mikel bụ nwoke dị ala nke nwere echiche doro anya gbasara ndụ. Ọ bụ onye kwenyere n'echiche ahụ, na ụzọ kachasị mma iji nwee ihe ịga nke ọma bụ ibi ndụ dị mfe.
Iji Mmụta Mikel Oyarzabal kọwaa ụdị onye ọ bụ:
N'ịbụ ndị a na -agbanyeghị ụkwụ ya ka ọ daa n'ala, nka Basque na -emeso ịga ụlọ akwụkwọ dị oke mkpa. Oyarzabal maara eziokwu na ọrụ ịgba bọọlụ dị mgbagwoju anya. Maka nke a, ọ (ogologo oge gara aga) mere atụmatụ B.
Nhọrọ nke abụọ maka ọrụ ịgba bọl bụ ebumnuche ya nke ịgụ akwụkwọ. Mgbe ụlọ akwụkwọ praịmarị na ụlọ akwụkwọ sekọndrị gachara, onye Spaniard gara mahadum - ọbụlagodi mgbe ọ na -ekwenye na nnukwu ihe egwuregwu bọọlụ ọkachamara chọrọ.
Ka m na -ede Biography a, Mikel Oyarzabal bụ onye mpako gụsịrị akwụkwọ na azụmaahịa azụmahịa na Mahadum Deusto. Nke a bụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị nkeonwe, nwere ogige na Bilbao na San Sebastian.
Onye maara… Maka nwoke maara ka esi eme ọtụtụ ihe n'etiti bọọlụ na agụmakwụkwọ, anyị ekwesịghị iju anya hụ onye Spen nwere MSc na PhD n'afọ ndị na -abịa.
Mikel Oyarzabal Ndụ Ndụ:
Obi abụọ adịghị ya, ọ na -eme ọtụtụ ego, mana nke ahụ anaghị arafu ya. Eziokwu bụ, Mikel bụ ezigbo ọgwụ mgbochi ibi ndụ. Oyarzabal abụghị onye ejiji ma ọ bụ onye na -eji ejiji mara mma dị ka ụfọdụ ndị na -eme egwuregwu - ụdị nke Paul Pogba or Neymar.
N'ime ụwa nke iji ego bọọlụ na -ebi ndụ dị egwu, onye egwuregwu bọọlụ Spanish anaghị esetịpụ ụda. Dị ka a hụrụ ebe a, ụgbọ ala Mikel Oyarzabal dị ala (yiri nke N'Golo Kante). Ọzọkwa, ọ na -eji ejiji dị mma.
Mikel Oyarzabal Web, ụdị ụgbọ ala ya, gụnyere echiche nke ibi ndụ dị mfe kọwara na vidiyo a.
Ndụ Ezinụlọ Mikel Oyarzabal:
Enweela ụdị nkwado mmetụta uche nwa amaala Basque agaghị akwụ ụgwọ. Bịa na mmiri ozuzo ma ọ bụ na -enwu, papa ya (Ernesto), mama m na ụmụnne nwanyị abụọ nọ ebe ahụ mgbe niile - na -enye ya ike imeri dragọn.
Lee, otu n'ime oge mpako ezinụlọ ya.
Akụkụ a nke akụkọ ndụ anyị na -agwa gị gbasara ezinụlọ ya - bido na nna ya.
Banyere Nna Mikel Oyarzabal:
A kọwara Ernesto nke ọma dịka onye nwere agwa adịghị mfe. Nna ukwu nke ụmụ atọ na -ewere ọrụ nke ijikwa ọrụ nwa ya nwoke - n'agbanyeghị na ọ pụtara ịkwụsị ọrụ mbụ ya. Mikel na papa ya na -anọchite anya ya dị ezigbo nso.
Mikel Oyarzabal na nna ya (Ernesto) sere foto. Nwoke na -eduzi ya mgbe niile.
Banyere mama Mikel Oyarzabal:
Ọ bụ ezie na Ernesto na -ahụ na nkwụsi ike nke ọrụ, ọ na -eme ọtụtụ ụlọ. Ma eleghị anya, ezighi m ezi maka nke a, mana ọ bụ ihe nlele m si n'ọtụtụ ezinụlọ m zutere. Ụmụ nwoke mbụ ahụ na -abụkarị okpueze nke Nne ha. Nke a na -akọwa mmekọrịta dị n'etiti Mikel na mama ya.
Mikel, Elene na mama ya - laa azụ n'oge ahụ.
Banyere Cristina Oyarzabal:
Dị ka nwanne ya nwoke, ọ gụkwara akwụkwọ nke ukwuu - ruo n'ọkwa mahadum. Nnyocha nwere na Cristina Oyarzabal bụ onye gụsịrị akwụkwọ na azụmaahịa na Mahadum Basque Country. Nke a bụ mahadum ọha Spanish nke Basque Autonomous Community.
Cristina na Mikel anọwo nso - kemgbe ha bụ nwata.
Banyere Elene Oyarzabal:
Ya, nwa nke ezinụlọ bịara ụwa gburugburu n'etiti 2000s. Elene Oyarzabal, ọdụdụ nwa nke Ernesto, tolitere na -ahụ onwe ya na nnukwu ịhụnanya gbara ya gburugburu - ọkachasị site na nnukwu nwanne ya nwoke.
Ka anyị na -emekwu nyocha, anyị na -achọpụta na aka Instagram nke Elene Oyarzabal bu aha njirimara elene_oyar, o wee debe ya na nzuzo. Ọ dị ka ọ na -enwe mmasị ịga ezumike yana mee ya obi ụtọ karịa ndị na -eso Instagram 2,300.
Mikel Oyarzabal Eziokwu efu:
Akụkụ nke akụkọ ndụ anyị na-ekpughe ụfọdụ eziokwu amachaghị banyere onye ọkpọ Basque si n'obodo Guipuzcoan nke Eibar. N'atụghị egwu ọzọ, ka anyị bido.
Eziokwu nke 1 - Ntụnyere ụgwọ ọnwa na nkezi nwa amaala Spanish:
Kwa izu, Mikel Oyarzabal na -enweta ihe dị ka € 57,000 site na Real Sociedad - SoFIFA na -akọ. Chọta ebe a na ndakpọ ụgwọ ọnwa onye Spen na ego ọ na -eme kwa sekọnd.
Mikel Oyarzabal Real Sociedad Salary ndakpọ (Euro)
Ego a na -enweta kwa afọ: € 2,968,560
Nweta ego kwa ọnwa: € 247,380
Ego a na -enweta kwa izu: € 57,000
Ego a na -enweta kwa ụbọchị: € 8,142
Nweta kwa elekere: € 339
Nweta ego kwa nkeji € 6
Ego a na -enweta na sekọnd ọ bụla: € 0.09
Kemgbe ị malitere ịgụ Mikel Oyarzabal'Biography, nke a bụ ihe o nwetara na Real Sociedad.
Ebe o siri bịa, nkezi ego onye na -ebi na Spain na -enweta kwa afọ bụ ihe dị ka € 27,000 (akụkọ Expatica). Yabụ, ọ ga -ewe nkezi nwa afọ Spanish afọ itoolu iji kwụọ ụgwọ Mikel Oyarzabal na Real Sociedad.
Eziokwu nke abụọ - egbugbu efu:
Na ụfọdụ ndị egwuregwu - dịka ọmụmaatụ, ihe na -amasị ya Mohamed Salah wdg, mkpụrụ ndụ ihe nketa bụ ihe na -ebutekarị aka aka. Otu ihe kpakpando ndị a na -ahụkarị bụ enweghị nka. Mikel Oyarzabal nke anyị anaghị eche maka igbu egbugbu n'ọdịnihu.
Eziokwu #2 - Profaịlụ Mikel Oyarzabal:
Mgbe ọ dị afọ 24, talent ndị Spain adịghị nso ọnụ ọgụgụ ya kacha elu, dị ka ọnụ ọgụgụ FIFA ya si egosi na ọ bụ ọkaibe zuru oke. Mikel nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile-yana dịka onye ọkpọ nke oge a siri chọọ ya. N'ezie, ọ bụrụ Jack Grealish ruru 100m, otu a ka Mikel Oyarzabal dị.
Eziokwu nke 4 - Okpukpe Mikel Oyarzabal:
Onye ọkpụkpọ Spanish ka na -ekerịta ozi gbasara nkwenye n'ihu ọha. Agbanyeghị, n'ịtụle na okpukpe kacha eme na Spain bụ Katọlik, nsogbu anyị na -akwado Mikel Oyarzabal ịbụ onye Kristian.
Tebụl dị n'okpuru na -ekpughe ozi Wiki dị nkenke gbasara Mikel Oyarzabal. Jiri ya mee ihe site na profaịlụ Wiki ya - yana obere nsogbu.
MIKEL OYARZABAL WIKI AJỤJỤ
Aha zuru ezu: Mikel Oyarzabal Ugarte
Ụbọchị ma ọ bụ Ọmụmụ: Daybọchị mbu nke Eprel 21
Age: 24 afọ na ọnwa 7.
Ebe amụrụ onye: Eibar, Spain
Ndị nne na nna: Mr na Mrs Ernesto Oyarzabal
Ụmụnne: Cristina Oyarzabal (nwanne nwanyị nke okenye) na Elene Oyarzabal (nwanne nwanyị nke obere)
elu: 1.81 mita ma ọ bụ 5 ụkwụ 11 sentimita asatọ
Ezigbo Net: 8 nde Euro (2021 stats)
Ọnọdụ egwuregwu: Ọkụ aka ekpe, Na -aga n'ihu, na -awakpo etiti
Mgbe anyị chere maka ọkpọ ọkpọ bọọlụ nke oge a, anyị na-eche maka ndị dịka Mikel Oyarzabal. Nnukwu Ụkwụ, dịka ha na -akpọ ya, bụ ọkaibe n'ịgba egwu na imesi ike nke na -enyere aka ịkwalite bọọlụ gafere ahịrị ndị iro.
Mikel bụ nke ezinụlọ Oyarzabal (akụkụ nke nna) na ezinụlọ Ugarte (nne). O toro na ụmụnne ya nwanyị abụọ (Cristina na Elene), Mama na Papa (Ernesto), ọ nwere ọhụụ doro anya nke ihe ọ chọrọ na ndụ.
N'ịtụle etu Mikel siri mee nke ọma ọbụlagodi n'ọgbọ egwuregwu bọọlụ (dịkwa na agụmakwụkwọ), yabụ, anyị na -ezo aka hụ ya dịka otu n'ime ndị egwuregwu bọọlụ kachasị 'Multitasker. Omume nke ịhazigharị egwuregwu na agụmakwụkwọ bụ ihe akaebe doro anya nke ọgụgụ isi ya.
Daalụ maka ịnọnyere anyị na akụkọ ndụ nke otu ihe egwuregwu bọọlụ kacha ekwe nkwa na Spain. Na Lifebogger, anyị na -agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ n'ọrụ anyị nke ịnye akụkọ akụkọ bọọlụ gbasara Ndị egwuregwu bọọlụ Spanish.
Anyị na -atụ anya na ị ga -ahụ Mikel Oyarzabal's Biography ka ọ baa uru. Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịhụ ihe ọ bụla adịghị mma ma ọ bụ soro omume kacha mma. Ma ọ bụghị ya, anyị nwere olile anya na ị ga -erite uru na akụkọ bọọlụ anyị ndị ọzọ.
Akwụkwọ akụkọ Sociedad ezigbo Sociedad